Teti-bola 2006 -
Teti-bola 2006 - « Vao mainka hampidangana ny vidim-piainana » hoy Olivier Rakotovazaha
Kianin’ny mpahay toe-karena sasantsasany ny mbola fampidirana ny pôlitikam-pihafiana ao amin’ny teti-bola 2006.
Ankoatra an’ireo fanamarihan’ny solombavambahoaka, dia manana ny ambarany, amin’ny maha mpahay toe-karena azy, Ing. Rakotovazaha Olivier. Nivantana ny nilazany fa ny politikan’ny fifehezan-kibo izay efa tsy nahitam-bokany no mbola voarakitra ao amin’ny teti-bola 2006 ihany, ka azo antoka fa vao mainka hampidangana ny vidim-piainana izany.
Tsy nanao afa-tsy nampihafy ny vahoaka mantsy io pôlitika io, hoy Ing. Olivier Rakotovazaha, nefa ny mifanohitra amin’izay no tokony hatao, izany hoe tokony hampitomboina ny famoronana sy ny fananganan-javatra, mba hahabe ny entana ilaina amin’ny andavanandro ka hanosika ny vahoaka hampitombo ny fihinanana ny vokatra misy. Araka ny fanazavana nomen’io mpahay toe-karena io, dia mbola hampiakatra ny vidim-piainana ihany koa ny fanapahan-kevitra voarakitra ao amin’ny teti-bola 2006 hampihenana 18% ny TVA sy hampiakarana ny haba alaina amin’ny solika. Raha vao ny resaka solika mihitsy, hoy izy, no kitihina dia tsy maintsy miteraka fahasarotan’ny fiainam-bahoaka andavanandro izany.
Ankoatra ny fananganan-javatra sy ny fampitomboana ny fampiasam-bola dia tokony hitadiavam-bahaolana haingana ny delestazy sy ny sondro-bidim-piainana, hoy ihany io teknisianina io. Saingy ny mahagaga, hoy izy, dia toa tsy any mihitsy no lalana itondran’ny tomponandraikitra ny raharaha.
Tamin’ny sehatra iraisam-pirenena dia anisan’ny niatrehan’izao tontolo izao fahasahiranana, hoy izy, ny “Plan Marshall”. Notsahiviny fa efa niresaka azy io ny Filoham-pirenena. Araka ny hevitr’Ing. Rakotovazaha Olivier anefa, dia mitaky fepetra hentitra, toy ny fahamarinan-toerana pôlitika, ny fifampatokisana eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka ny fampiharana tetika maty paika toy ireny vao mba hampahomby izany. Raha ny “Plan Marshall” izany no raisina ho vahaolana eto amintsika dia mbola miverina ihany, hoy Ing. Olivier Rakotovazaha, ny resaka “amnistie” sy ny fampihavanam-pirenena efa noresahina hatramin’izay.
Midi Madagasikara 14-11-2005